Top 5 Lugood plugins
> Resource > Lugood > Top 5 Lugood plugins | Free Download
Top 5 Lugood plugins | Free Download
Waa wakhti ay ku qaadan Lugood si aad u heer soo socda iyadoo la isticmaalayo dheeraad fur-tago. Maqaalkani waxa uu dabooli doono 5 plugins Lugood waxtar leh u lyrics, muuqaalaynta, EQ, file wareejinta iyo nadaafadda song raadkaagu.
Hel this Saaxiib weyn oo Lugood oo ka raadin kartaa macluumaadka loogu talagalay heesaha oo dhan sida album, artist, farshaxanka album, lyrics iyo ka badan. Ogsoonow in macluumaadka sidoo kale la gundhig karaa in files music si aad u qaadan kartaa go ka. Baro More >>
Lugood Lyrics plugin - Saaxiibkii Lugood
Tani waa lyrics ugu awooda badan plugin for Lugood aannu aragnay oo aannu baaro. Feature Lyrics waa feature seegi ka Lugood oo dhan version . Iyada oo ay taasi Lugood lyric fur-in, waxaad si fudud u daawan kartaa lyrics ee music ah haatan u ciyaara haddii ay jiraan. Haddii kale, waxaad u baahan tahay raadin database default ee lyrics ah, ama waxaad ka heli leh Google. Marka lyrics waa soo kaxeeyey, Saaxiibkii Lugood si toos ah u badbaadin karto si ay u files song. Waxaa intaa dheer, waxa aad sameyn kartaa lyrics karaoke-style fudayd.
Ogsoonow in aad u baahan tahay inaad codsiga Yahoo Widgets (madal) rakibi hor inta aadan isticmaalin tan Lugood Lyrics fur-in.
Lugood Visualizer plugin - Cover Version
Cover Version waa visualizer ka siib-in Lugood oo aan kaliya ku tusaysaa farshaxanimada cover album ee songs, kuwaas oo haatan u ciyaara kooxda, laakiin sidoo kale muujinaya lyric, haddii uu jiro. Sidaa darteed, haddii aadan jeclaan Lugood Lyrics plugin kor ku soo bandhigay, waxaad xiiseyn lahaa inuu la isticmaalayo plugin Visualizer-Lyric this.
Sida plugin visualizer ah, plugin Cover Version bixisaa saamaynta kala duwan, ee arts cover album noqon lahaa bandhigay sida qoqobada ama bulukeetiga guryaha , Kaleidoscopeka, booska calanka, iyadoo saamayn Vertigo, ama sida saraysa Murayaad . Waxaad sidoo kale fursado badan oo ay ku astaysto saamaynta muuqaalaynta ah. Cover Version waa labada diyaar u Windows iyo Mac. Waxaad ku soo bixi kartaa halkan iyo aragto macluumaadka faahfaahsan oo dheeraad ah oo arrintan ku saabsan Lugood visualizer plugin.
Lugood barbaraha plugin - Audio afduubato Pro
Haddii aad tahay music enthusiast halis ah , waxaad ka heli kartaa barbaraha default ee Lugood waa mid aad u fudud. Halkan ayaa ah meesha Audio afduubato Pro yimaado. Waa plugin ee barbaraha ugu xirfad - tani waa waxa aan u bixiyey - mid ay homepage , Audio afduubato Pro yahay si ay u qoraan audio kasta ee Mac, 50 dhisay-in plugins si ay ula qabsadaan audio ka hor. Ma ahan a plugin Lugood lacag la'aan ah. Waxaa doonaa kacaysaa $ 32 . Laakiin waxaan u maleeyo qiimaha waa macquul ah ee noocan oo kale ah oo tayo sare leh Lugood plugin.
MobileGo u macruufka - plugin File Transfer
Waxaan aad badiyay aad Lugood maktabadda, MobileGo u macruufka (Windows) ama MobileGo u macruufka (Mac) timaado sida baado ah nolosha. Waxaa dib u maktabadda Lugood aad by jiidayeen macruufka ka kooban qalab si Lugood. Ka sokow, oo aad isticmaali karto qalab si dib ilaa video / music / sawir / xiriirada / SMS ka macruufka qalabka si computer , iyo sidoo kale DVD ama video, music, sawiro iyo ka badan oo ka computer qalabka la qaadi karo si aad u raaxaysan on go ah. Dhab ahaantii, waxa loo isticmaali karaa sida tababare file iPod / iPad / iPhone aan Lugood.
TuneUp - # 1 koronto-in u Lugood?
First of dhan, waxa karaa TuneUp idiin sameeyo? Hoos waxaa ku qoran sifooyinka muhiimka ah ee TuneUp:
1. Si toos ah soo gura song info
2. Delete kuwan raadkaygay song nuqul
3. Go'an daboolka ka maqan tahay albumka.
4. udajiyay music videos, qaylodhaan riwaayad, BIOS artist oo dheeraad ah
Sidaas awgeed waxa ku # 1 fur-in idiin sameeyo? Haddii aad qabto ururinta music waaweyn, runtii badbaadiyaa waqti aad iyo aad u yarayso. Sidoo kale isku dayi free laakiin ruqsad u helaan ka $39.95.
Sida loo dar metadata in MP3 Files
Sida loo dar Lyrics in Songs in Dufcaddii
Sida lagu Helo Free Lugood Songs
2 Solutions for Lugood ee kaabta musuqmaasuqa
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka tirtiraa kaabta Lugood Files
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka shaandheeyn lagu iPod in Lugood
Waa maxay Lugood playlist iyo Smart playlist ah?
Sida loo Muuji Song Lyrics for Lugood iyo iPod
Ka Lugood Bedelka Video / Podcasts Audio si iPhone (5s iPhone mid)